News - Olee otú iji wụnye slewing amị n'ụzọ ziri ezi?
Etu esi wụnye slewing amị n'ụzọ ziri ezi?
Etu esi wụnye ịkụ slewing n'ụzọ ziri ezi?
Site na mmepe siri ike nke ngwaahịa ndị ọrụ mmepụta ihe, dị ka akụrụngwa akpaaka, ígwè ọrụ mmepụta ihe, igwe na-ejuputa igwe wdg, ọtụtụ igwe chọrọ ịmị ọkụ, ya mere, ọchịchọ maka ịgbagharị agbagoro ebiliwokwa nke ukwuu, mana ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ka esi etinye ntinye na-agba ọsọ. n'ụzọ ziri ezi. Na nzaghachi nye nsogbu a, Xuzhou Wanda na-egbu ihe na-emepụta ihe na 20 afọ nke na-amịpụta arụmọrụ na-enye usoro ntinye ndị a.
Slewing agba echichi ntuziaka
(1) A ga-ahazi oghere ndị ahụ na-arụ ọrụ na ụgbọelu nrụnye na oghere ndị ahụ na-ebu ọkụ
(2) A ga-etinye eriri dị nro siri ike nke ịgba ọsọ mgbanaka ahụ (akara mpụga "S" ma ọ bụ oghere egbochiri) na mpaghara a na-ebupụtaghị ibu na mpaghara na-adịghị agbanwe agbanwe. A ga-etinye eriri dị nro nke ọsọ ọsọ dị n'ime na nke dịpụrụ adịpụ ruo 180 Celsius. Na ibuli ma na-egwupụta igwe, a ga-etinye eriri dị nro nke mgbanaka na-egbu egbu n'akụkụ 90 Celsius na ntụgharị nke ọganihu (ya bụ, ntụzi ibu kachasị).
(3) Kpọgide mgbanaka ahụ na-akụ na oche nkwado, ma lelee kọntaktị n'etiti ụgbọ elu na-egbu egbu na nkwado na nlele feeler. Ọ bụrụ na ọdịiche dị, enwere ike iji gasket mee ka ọ dị elu iji gbochie mkpọchi ahụ ka ọ gbanwee mgbe emechara ya, na-emetụta arụmọrụ nke mgbanaka ahụ.
(4) Tupu ị na-emechi mkpọchi ahụ, dozie ihe ndozi ahụ dịka ebe kachasị elu nke radial runout nke gear pitch gburugburu (ezé atọ edere agba agba). Mgbe emechiri mkpọchi ahụ, mee nyocha nyocha n'akụkụ ihe niile ị ga-eji na-arụ ọrụ.
(5) A ga-eji ihe nkedo dị elu mee ihe maka ịkwanye ihe nkedo na-ebu ihe, a ga-ahọrọ akara nke ike kwesịrị ekwesị dịka ike ahụ. Ekwesịrị ime ka mgbatị nke bolts rụọ n'ụzọ na-aga n'ihu na ntụziaka 180 Celsius, na n'ikpeazụ mechibidoro n'usoro iji hụ na ihe nkedo ndị dị na gburugburu ahụ nwere otu ike ahụ. Echichi kwesịrị ịsa ehichapụ na ewepụghị washers, amachibidoro ndị na-amị mmiri.
(6) Mgbe arụchara ọrụ ahụ gasịrị, a ga-ewepụ unyi na uzuzu dị na mgbanaka ahụ na-egbu ya, a ga-esekwa akụkụ ahụ ekpughere na agba mgbochi nchara, na agba ọsọ na akụkụ gia ga-ete ya na abụba.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara mgbanaka mgbanaka ahụ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Biko tụkwasị obi na Xuzhou Wanda na-agba ọsọ na-abụghị naanị na-ere igbu egbu, kamakwa ọ nwere ike ịnye gị ngwọta!